Ogaden News Agency (ONA) – Abiye Axmed oo Bangiga Aduunka Kaalmo Waydiistay.
Abiye Axmed oo Bangiga Aduunka Kaalmo Waydiistay.
Raysalwasaaraha Itoobiya Abiye Axmed oo socdaal kutagay wadanka Maraykanka ayaa la kulmay dhinacyo badan oo kamid ah dadka daneeya arimaha Itoobiya iyo waliba Jaaliyada Itoobiya ee wadanka Maraykanka.
Abiye Axmed ayaa la kulmay gudoomiyaha Bangiga aduunka Jim young kim wuxuuna kacodsaday in wax lagala qabto dhaqaalaha wadanka Itoobiya oo sanadihii lasoo dhaafayba dhulka kusii dhacayay, wuxuuna Abiye Axmed dalbaday waxqabad muuqda oo loo fidiyo dalkiisa tabaalaysan.
Jim young kim ayaa sheegay in ay wax ka qabanayaan dhaqaalaha wadanka Itoobiya ee hoos u socda waa hadii ay buuxiyaan shuruudaha u yaala Bangiga aduunka oo Itoobiya ay kasoo bixi wayday, waana arinta keentay burburka dhaqaalaha Itoobiya ayuu yidhi Jim young kim.
Dhinaca kale Abiye Axmed ayaa lakulmay madaxwayne kuxigeenka wadanka Maraykanka waxaana lasheegayaa in ay kawada hadleen arimo dhowr ah oo kusaabsan dhibaatooyinka Itoobiya kajira, wuxuuna Abiye Axmed dowlada Maraykanka kadalbaday in ay caawiyaan dalkiisa isagoo sheegay in ay Maraykanka abaal uhayaan.
madaxwayne kuxigeenka Maraykanka ayaa sheegay in dowladiisu ay kawalwal qabto dhibaato kale oo kusoo laabata wadanka Itoobiya wuxuuna xukuumada cusub ee Gumaysiga Itoobiya kulataliyay in ay wax kabartaan wixii lasoo maray.
sidoo kale Abiye Axmed ayaa lakulmay gudoomiyaha Jabhada Ginbot 7 Pro Birhanu Naga iyo xubno kale oo mucaaradka Itoobiya ah waxayna sheegeen in ay bayaan kasoo saari doonaan waxyaabihii ay kawada hadleen dhinacyadii kulmay.